Fotoam-piraisam-be amin'ny namana 48
Moa ve ny tsara indrindra ho an'ny lehilahy handao ny vatana nofo aman-dra tsy fantatra, mba hahafahan'ny fanahy miditra ao amin'ny nofinofiny?
Ny tsara indrindra ho an'ny lehilahy manana andraikitra no mahatsiaro ny zavatra rehetra ataony amin'ny toe-batana sy ny fanjakàna rehetra. Raha toa ny olona - ny dikan'ny fitsipiky ny saina ao anaty vatana - manapa-kevitra ny handao ny vatany ara-batana, dia avelany tsy ho takatry ny saina izany; raha mamela ny vatany tsy mahatsiaro izy izy dia tsy manan-tsafidy amin'io raharaha io.
Tsy ilaina amin'ny fanahy - ny maka azy io hoe "ny olona" sy ny "fanahy" dia ao anatin'ny fanontaniana izay natao mba hitovian-kevitra - hiala amin'ny vatan'ny vatany ka hiditra amin'ny toerany. Raha tsy fahita ny olombelona, ​​dia mamela ny vatany tsy ho faty.
Mahatsiaro ny fahaizany ny olona; mahatsiaro tena eo amin'ny nofinofy izy; tsy mailo izy mandritra ny andalan-teny hatramin'ny nifohazana ka hatramin'ny nofinofy; izany hoe eo anelanelan'ny fotoana farany rehefa mifoha izy sy ny fiandohan'ny nofinofy. Ny fandalovan'ny vatana ho any amin'ny fanjakana nofy dia mifanandrify amin'ny dingan'ny fahafatesana; ary na dia amin'ny fisainana sy ny fihetsika aza ny olona no mamaritra ny hoe ahoana sy ny fihaviany, tsy fantany na tsy fantany ny fandehan'ny fotoana rehefa tonga ny fotoana, na dia mety hisy fihetseham-po amin'ny fandalovana.
Rehefa fantatry ny olona ny fomba hidirany sy ny fomba handaozany ny fotoana nofinofy, dia mitsahatra tsy ho olon-tsotra izy, ary zavatra mihoatra noho ny olon-tsotra.
Hatraiza no avoakan'ny fanahy izay mamela ny vatany amin'ny saina sy mijanona ao aorian'ny fahafatesana?
Miankina amin'ny hoe inona no eritreritra sy fihetsika asehon'ny mpanontany azy amin'ny maha-fanahy azy, ary amin'ny fanatanterahana ara-tsaina sy ara-panahy amin'ny fiainana ara-batana hafa ary indrindra amin'ny farany. Raha afaka mandao ny vatany ara-batana ny olona rehefa maty, dia maniry izy na manasazy ny fahafatesana. Aoka ny olona iray nandia ny fizotran'ny fahafatesana tamim-pahatsorana na tsy nahatsiaro tena, ny toe-tsaina hahatongavany, izay ampidiriny, mifandraika ary voafaritry ny fahazoany fahalalana mandritra ny androm-piainany amin'ny vatany eto an-tany. Tsy fahazoana vola sy fananana vola sy fananana an'izao tontolo izao, na dia lehibe, na toerana ara-tsosialy, na tsy mahalala ary mahay ny fombafomba sy fivoriambe, ary tsy fatra sy fahafaham-po ny eritreritry ny olon-kafa; tsy misy amin'ireny isa ireny. Ny fahatsapana taorian'ny fahafatesana dia miankina amin'ny haavon'ny fahatongavan'ilay lehilahy nandritra ny androm-piainany; amin'izay fantany ny fiainana; mifehy ny filàny; momba ny fampiofanana ny sainy sy ny fiafarany efa nampiasainy, sy ny fiheverany ny hafa.
Ny lehilahy tsirairay dia afaka mamolavola ny heviny momba ny fanjakana aorian'ny fahafatesany amin'ny alàlan'ny fahafantarana izay "fantany" sy ny ataony amin'ny fiainana miaraka aminy, ary inona ny fihetsiny amin'ny tontolo ivelany. Tsy izay lazain'ny olona na ny zavatra ninoany aorian'ny fahafatesana no hiaina azy aorian'ny fahafatesana. Ny pôlitika ara-pinoana namboarina ho lahatsoratra misy ny porofom-pinoana sy ny finoan'ireo teolojiana nantenaina na noho ny lolom-po momba an'izao tontolo izao dia tsy hahatonga ny olona ho tonga saina sy hahazo ny fahafatesana ny zavatra reny tamin'ny taloha, na dia nino ny zavatra reny aza izy ireo. . Ny toe-javatra aorian'ny fahafatesana dia tsy hita ny toerana mafana izay nomanina ho an'ireo tsy mino, ary ny finoana sy ny maha-mpikambana ao amin'ny fiangonana ihany no manome lohateny amin'ny toerana voafidy any an-danitra. Ny finoana ny fanjakana taorian'ny fahafatesana dia tsy afaka mampisy ireo fanjakana ireo raha toa ka misy fiantraikany amin'ny toe-tsainy sy ny asany. Tsy misy andriamanitra any an-danitra manandratra ny olona hiala amin'izao tontolo izao sy ny tratrany; tsy misy devoly misambotra olona eo ambonin'ny fantsonany rehefa mandalo izao tontolo izao izy, na inona na inona zavatra ninoany nandritra ny fiainana, na izay efa nampanantenainy na norahonan'ireo teolojiana. Ny tahotra sy fanantenana alohan'ny fahafatesana dia tsy hanova ny zava-misy aorian'ny fahafatesana. Ny zava-misy niainga sy namaritana ny olombelona aorian'ny fahafatesany dia izao: izay fantany sy ny talohan'ny nahafatesany.
Afaka mamitaka ny olona momba ny tenany ny olona raha mbola eto amin'izao tontolo izao; amin'ny fampiharana dia mety hianatra hamita-tena momba ny tenany izy mandritra ny fiainany ara-batana; saingy tsy afaka mamitaka ny fahaizany avo, ny Tenany Izy, araka ny niantsoana azy indraindray, momba izay noheveriny sy nataony; satria ny zavatra rehetra noeritreretiny ary noheveriny fa amin'ny an-tsipiriany ary ao anatin'ny sainy avokoa ny azy rehetra; ary araka ny lalàn'ny fahamarinana tsy manam-petra sy tsy misy dikany, izay tsy misy fiakarana ary tsy afa-mandositra, dia izay noheveriny sy notsidihiny.
Ny fahafatesana dia dingana manasaraka, manomboka amin'ny fotoana avelan'ny vatana ara-batana ka ho tonga saina ao amin'ny fanjakan'ny lanitra. Ny fahafatesana dia misintona ny zavatra rehetra tsy an'ny olona any an-danitra. Tsy misy toerana any an-danitra ho an'ny andevony sy ny bankiny. Raha olona irery no tsy misy azy ireo dia tsy afaka any an-danitra izy. Izy irery ihany no mahazo mankany an-danitra izay an'ny lanitra ary izay tsy iharan'ny afobe. Ny andevo sy ny tany ary banky dia mijanona an'izao tontolo izao. Raha nisy olona nihevitra fa azy ireo ny tenany fony izy teto an-tany, dia diso izy. Tsy afaka manana azy ireo izy. Afaka mahazo fampanofa-javatra amin'ny zavatra izy, kanefa ny fananany dia tsy azony atao ihany. Izay tsy very dia mandeha hiaraka aminy ho any an-danitra, mijanona eto an-tany ary maharitra mandrakizay izy. Mety hosaronany izy ka hosaronany azy amin'ny zavatra tsy azy, fa mbola fantany. Ny toe-tsaina izay idiran'ny olona sy fantany mandritra ny fiainana dia hidirany ary hahafantatra aorian'ny fahafatesana, raha eo amin'ny fiainana ara-batana kosa izy dia sorena olana sy fikarakarana an'izao tontolo izao. Ao amin'ny “haavo avo”, na lanitra, izay tsy tsapany fa tsy matahotra sy manelingelina. Na iza na iza manakana ny fahasambarana eo amin'izao tontolo izao dia esorina tsy ho eo amin'izany fanjakana izany.